Eeshiyaa Biibii: Paakistaan dubartii amantaan himatamtee ajjeefamuu qabdi jedhamte bilisa baaste - BBC News Afaan Oromoo
Eeshiyaa Biibii: Paakistaan dubartii amantaan himatamtee ajjeefamuu qabdi jedhamte bilisa baaste
Dhimmi Eeshiyaa Biibii namoota hedduu addaan qoqqoodeera
Manni murtii Paakistaan murtoo du'aa dubartii amantiinshee Kiristaana taate irratti darbee ture kuffiisuun bilisa ishee baase.
Murtoon kun lammiilee Paakistaan kumaatamaan dheekamsiisuun mormiif gara daandiitti isaan baaseera.
Eeshiyaa Biibii bara 2010 ollaa ishee waliin walitti buutee Raajicha Mohaammad arrabsiteetti jedhamuun himanni irratti dhiyaate.
Balleessaa tokkollee akka hin qabne himachaa turtus waggoota saddetiif garuu to'annaa jala turteetti.
Wantoota 7 waa'ee biyyoota Commonwealth
Shamarree Hamar du'a irraa hafte
Namootni seera arrabsoo amantaa akka malee deeggaran nannoo mana murtii Islaamaabaaditti waliiti qabamuun mormiif abhaniiru.
Jeequmsi ka'uu danda'a sodaan jedhu jiraatus, poolisoonni hedduunis naannichatti bobba'anii jiru.
Akkasumas Kaaraachii,Laahooree, fi Peeshwaaritti mormiif bahaniiru.
Daandiin naannoo Rawaalpiindii irraa gara Islaamaabaad fidus akkasuma cufameera.
Namootni mormiif bahan kunnen dubartiin kun Raajicha Mohaammad waan arrabsiteef ajjeefamuu qabdi murtoon kanaan dura hojiirra ooluu qaba jedhu.
Dursaan dhimma haqaa murticha dubbise Saaqib Nisaaraam, Eeshiyaa Biibii yakka ittiin himatamtu biraan yoo hin jiraanne balleessaa irratti waan hin arganneef mana hidhaa Sheekuupuuraa naannoo Laahooree jedhamtuu keessaa baatee bilisaan deemuu qabdi jedhe.
Murtoon kun yeroo darbu mana murtiitti dhiyaachuu baattus yeroo dhageessu garuu dhugaa jettee hin amanne ture.
'' Waanan dhagahaa jiru kana amanuu hin danda'u, dhuguma alatti na gadhiisuu?'' jettee bilbilaan dubbachuusaa AFP gabaaserera.
Manni murtii addabbii du'aa dubartii abbaa warraashee ajjeestee haqe
'Itoophiyaan jijjirama seena qabeessa irratti argamti'
Eeshiyaa Biibiimaaliin himatamte?
Eeshiyaa Biibii maqaa guutuun ishee Eeshiyaa Nooreen yoo tahu bara 2009 ture dubartoota tokko waliin mormii kan jalqaban.
Meeshaa bishaan ittiin waraabbatan tokko irratti ture osoo oomisha sassaabaa jiranii kan walitti bu'an.
Dubartiin tokko meeshaa bishaan ittiin dhugan kana Eeshiyaan waan harkaan qabdee itti fayyadamteef nuyi harkaan hin tuqnu jedhan.
Sababni isaa Eeshiyaa Biibii amantaan ishee Kiristaana waan taheef meeshaa sana akka waan xureessiteetti ilaalan.
Abbootiin alangaa akka jedhanitti walitti bu'insichaan booda Eeshiyaa Biibii raajii Mohaammad yeroo sadii waan arrabsiteef amantaa ishee gara Islaamaatti jijjiiruu qabdi jechuun himatti.
Booda Eeshiyaan mana jireenyaa ishee keessatti reebamte. Haa tahu malee arrabsoo amantaan [blasphemy] waan himatamteef poolisiin qorattee itti murtaa'e.
Arrabsoon amantaa [blasphemy] Paakistaanitti maali?
Kun seera bara 1960 nama Biriiteniin tumame. Seerichis wal gahii amantootaa jeequu, lafa awwaalaa eeyyama malee dhaquu, amantaa arrabsuu fi itti yaaduun meeshaa waaqeffannaa balleessuun hanga hidhaa waggaa 10tti nama adabsiisa jedha.
Bara 1980 keessa jechootni biroonis bulchaa Paakistaan yeroo sanaa Jen. Ziyaa ul-Haag'n itti dabalamaniiru.
1980 - Hidhaa hanga waggaa sadii nama waan gadhee hayy
1982 - Hidhaa umurii guutuu nama beekaa Quraana salphise ykn gadi buuse
1986 - "Murtoo du'aa, ykn umurii guutuu'' nama raajii Mohaammad arrabse.
Manni murtii maal jedhe?
Abbootiin seeraa ajjeechaan jedhame raawwachuu hin danda'u sabani isaas shakkiirra kan darbe waanti ittiin mirkaneesinu hin jiru jedhan.
Himatichis ragaa quubsaa irratti waan hin hundoofneef dabalata ammoo murtoon darbee ture adeemsa sirrii kan eeggate miti jechuun kuffiseera.
Jecha isheen kennitee tures fuuldura namoota hedduutti yeroo ajjeesuuf sodaachisan tahuu himeera.
Himatichi seenaa amantaa Islaamaa fi Quraana kan bu'uureffate yoo tahu dhumarratti garuu jechoota raajii Mohaammad namoota amantaa biraa hordofan karaa gaarii taheen ofitti qabaa jedhamuun murtichi darbe.
Deeggarsa akka ajjeefamtuuf bahame.
Murtoon ammaa akka balaaleffatamu kan taasise tokko amantaan Islaamaa amantaa biyyaalessa Paakistaan tahuu dha.
Abbootiin siyaasaa dhimma wal fakkaatuun ajjeechaa hedduu deeggaraa turan deeggarsa hawwaasaa argachuuf jecha akka waan quuqama amantichaaf qabuutti uummata mormiif waaman.
Qeeqxotni tokko tokko garuu seericha dahoo godhachuun nama tokko waliin yeroo waliiti bu'insi uumamu akka haaloo bahannaatti itti fayyadamaa jiru jedhu.
Hordoftootni amantaa Kiristaanaa Paakistaanitti %1.6 yoo tahan erga bara 1990 as himata wal fakkaataan namootni baay'een ajjeefamaniiru.
Eeshiyaa Biibii dubartii yeroo jalqabaaf murtoon du'aa irratti darbe yoo taatu haadha ijoollee afuriiti.
Intala Eeshiyaa Biibii fi abbaa manaa ishee sodaa qaban yommuu ibsan.
Amma namootni hedduun gadhiifamuushee mormaa jiru.
Kanaaf maatiin ishee lubbuu isaaniif sodaa qabu. Intalli ishee Iishaam Aashiiq osoo gadhiifamtee ishee hammadhee boo'een gammachuukoo ibsadha. Waaqas nan galateeffadha jettee turte.
Amma maatii isaanii sodaa qaban irraa ka'uun biyyaa bahuu akka barbaadan himaniiru.
Biyyootni baay'eenis koolugaltummaa akka kennuufii barbaadan himan.
Viidiyoo, Paakistaanitti garaa garummaa amantaafi siyaasaan adda ta'anis bakka tokkotti awwaalamu.
27 Ebla 2018
Shamarree Hamar du'a irraa haftee abjuushee milkeeffatte
25 Adooleessa 2018
Dargaggeessa du'a miliqee kaanitti abdii hore
11 Onkololeessa 2017
Du'a Jamaal Khashojii : Gaazexeessaan kun ajjeefamuu Sa'udiin dhugoomte
Viidiyoo, Maalaawiitti du'a daa'immanii amma dhalatanii gad xiqqeessuuf mala jijjirama fidan sadan baraa
6 Bitooteessa 2018
Commonwealth: Waa'ee biyyoota Komanwalzii jedhamanii kana beektuu?
Paartiileen mormituu Naannoo Somaaleetti sochiin filannoo akka dhaabbatu gaafatan
Himannaa paartii Sochii Biyyaalessaa Amaara (ABN) irratti mootummaan maal jedhe?
Aanaalee Shawaa Kaabaafi Godina Addaa Saba Oromootti komaand postiin hundeeffame
'Dinqisaa Dabalaa marsaa lammessoof hidhame, mana murtiitti hin dhiyaanne'
Dhiyeenya magaalaa Haramaayaatti kirkirri lafaa Reektar iskeelii 3 ta'e mudate
Namtichi arba ajjeesuuf ture arbootaan ajjeefame
Masriitti balaan baaburaatiin namoonni 11 du'anii 98 madaa'an
Kilaboonni Piriimer Liigii 'gurguddoo ja'a' Suppar Liigii Awuroopparratti hirmaachuuf waliigalan
Biyyi waraanaan burkutaa'aa turte Sooriyaan filannoo gaggeessuuf
Suura keessan interneetarraa qabdan eenyu akka fayyadamu beektuu?
'Pirezidantii du'e waliin ana hin dorgomsiisinaa'- Pirezidaant Saamiyaa Hasan
'ABO fi KFOn boordichaan filannoo keessaa hin dhiibamne’